निर्मला हत्या प्रकरण : के हो डीएनए परीक्षण ? कसरी पत्ता लाग्छ दोषी ? - Dhangadhi Khabar
सोमबार ०९, जेठ २०७९ १९:४०
काठमाडौ : कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि दोषीको पहिचान अझै हुन सकेको छैन ।
दुई महिना हुन लाग्दा समेत घटनामा संलग्न अपराधी पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।
मृतकका बाबुआमा न्याय माग्दै काठमाडौं आएका छन् । विभिन्न स्थानमा पुगेर निर्मलालाई न्याय दिन उनीहरुले हारगुहार गरिरहेका छन् । देशव्यापी दबाब बढिरहेको छ । तर यस अवधिमा अपराधीको सुईंको समेत लाग्न सकेको छैन ।
नेपाल प्रहरी र त्रिवि शिक्षण अस्पतालका विधि विज्ञान विज्ञ डाक्टर हरिहर वस्तीसहितको टोलीले एसपी बिष्टसहितको डीएनए परीक्षणका लागि रक्त संकलन गरेको हो । यसअघि प्रहरीले मुख्य अभियुक्त रहेको भन्दै दिलिप सिंह बिष्टलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो ।
तर उनको डीएनए र निर्मलाको शरीरमा भेटिएको डीएनए नमिलेपछि दिलिपलाई प्रहरीले रिहा गरेको थियो ।
निर्मलाको हत्यामा संलग्न भएको भन्दै मुख्य अभियुक्त भनिएका दिलिपसिंह बिष्ट र अर्का युवा चक्र बडूको डीएनए रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेपछि अपराधी पत्ता लगाउन यो टोलीले सबै विधि प्रयोग गर्नेछ ।
निलम्बित प्रहरी अधिकृतहरुसँग बयानका क्रममा उनीहरुका कुरा सही या गलत भएको पत्ता लगाउन विकसित प्रविधि समेत यो समितिले प्रयोग गर्नेछ । गहन अनुसन्धानका लागि यो समितिले सीबीआर र ‘पोलिग्राफ टेस्ट’ समेत गर्ने प्रवक्ता थापाले जानकारी दिनुभयो ।
घटनालाई जसरी पनि सुल्झाउन प्रहरीसँग रहेको आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलमा गएको फागुन २८ गते भएको यूएस बंगला विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरुको शव डीएनए परीक्षणबाट पहिचान गर्दै परिवारलाई बुझाइएको थियो । प्रत्येक व्यक्तिको डीएनएको बनावट, औँलाहरु जस्तै एकअर्काबाट फरक फरक हुन्छन् ।
यी नमूनाहरु परीक्षण गर्ने मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाहरु छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पताल विधि विज्ञान प्रयोगशालामा यसको परीक्षण गर्न सकिन्छ । जसका लागि ८ हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्ने गर्छ । तर निर्मला प्रकरणमा भने सबै खर्च सरकारी तवरबाटै ब्यहोरिएको छ ।
नमूना लिइसकेपछि पन्ध्र दिनभित्रैमा यसको परीक्षण रिपोर्ट पाउन सकिन्छ । दिलिपसिंह बिष्टको तीन दिनमै परीक्षण टोलीले रिपोर्ट निकालेको थियो ।
मृतक बालिका पन्तको डीएनए रिपोर्ट आइसकेको र उक्त रिपोर्टमा अन्य एकजनाको समेत नमूना पाइएको परीक्षण रिपोर्टमा उल्लेख छ । त्यो पाइएको नमूना कस्को हो भन्नेबारे खुल्न सकेको छैन । यस अघि दिलिपसिंह बिष्टको डीएनए परीक्षण गर्दा बालिकाको शरीरबाट भेटिएको नमूनासँग मेल खाएन । उनी रिहा भए । अहिले फेरि तीन जनाको नमूना संकलन गरेर परीक्षण गरिँदै छ ।
यो परीक्षणका क्रममा नमूना मिल्न गए अपराधी सहजै फेला पर्न सक्छ । होइन भने प्रहरीको अनुसन्धानले फेरि अर्कै मोड लिन सक्छ ।
साउन १० गते घरबाट साथीकहाँ हिँडेकी कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ खोल्टीकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्त साउन ११ गते मृत अवस्थामा उखुबारीमा भेटिएकी थिइन् । उनको बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि डीएनए परीक्षणबाट भइसकेको छ । साभार : उज्यालाे अनलाइन
मङ्गलबार ०२, असोज २०७५ ०६:३५ मा प्रकाशित